ထေရ၀ါဒသည် ဟီနယာန မဟုတ်	Posted on August 28, 2009	by mettayate ယခုခေတ်တွင် ထေရ၀ါဒကို ဟီနယာနဟု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများ ထင်နေကြသည်။ ဟီနယာနသည် ထေရ၀ါဒမဟုတ်ကြောင်းကို လက်လှမ်းမှီရာစာအုပ်များ – ချမ်းမြေ့ဆရာတော်၏ တက္ကသိုလ်ဓမ္မသဘင် (ဗုဒ္ဓဘာသာ ၃ မျိုး ပို့စ်တွင် ပြန်လည်ရေးသားတင်ထားပေးပါသည်။) နှင့် ဆရာတော်ဦးဇ၀န ရေးသားသော မျက်ရည်မကျခင်သိစေချင်စာအုပ်တွေ (ယခုပို့စ်တွင် ပြန်လည်ရေးသားတင်ပေးထားပါသည်။) ရေးသားထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်စားနေသော “ဥုံမဏိပဒ္ဓမေဟုံ” ဟူသော မန္တန်မှာ နီပေါနိုင်ငံမှလာသော မဟာယာနမန္တန်တစ်ခုပင်။ အ၀လောကိတေသွာရ ဘုရားလောင်းက တာယာဒေ၀ီကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထေရ၀ါဒမဟုတ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝအားဖြင့်လည်း ရတနာသုံးပါးနှင့်စပ်ဆိုင်သောအချက်တစ်ခုမှ မပါသောကြောင့်လည်းကောင်း ကုသိုလ်တရားပွားများစရာ မရှိ၍ မရွတ်သင့်ပါ။
မဟာယာနတို့က ဘုရားဖြစ်ပြီးစ မိဂဒါဝုန်တော၌ ဟောကြားသော ဓမ္မစကြာတရားတို့သည် လူညံ့လူဖျင်းများ၊ သာဝကလမ်းစဉ်လိုက်သူများအတွက် ဟောကြားခြင်းဖြစ်၍ ဟိနယာနပိဋက ဟု ဆိုကြ၏။ ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူတို့သာ နားလည်နိုင်သော ခက်ခဲနက်နဲသော ဘုရားအလောင်းလမ်းစဉ်ကိုမှု ရာဇဂြိုလ်ပြည်၊ ၀ိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ ဟောခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ကျမ်းအမျိုးမျိုး စိတ်ကြိုက်ရေးသား၍ မဟာယာနပိဋက ဟု ဆိုကြ၏။
This entry was posted in မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← သိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်ချက် (၁၀) မျိုး